Ejypta: Manaja ny Jirom-pifamoivoizana · Global Voices teny Malagasy
Ejypta: Manaja ny Jirom-pifamoivoizana
Voadika ny 27 Mey 2017 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: Lahatsoratra efa tamin'ny volana Aogositra 2008 ny tamin'ny teny anglisy)
Inona no toetra tokony hananan'ny olona rehefa miampita arabe, raha anisan'izao tontolo izao ny firenen'izy ireo? Bilaogera Ejypsiana Egyptian in the USA, mitondra antsika ny valinteny ao amin'ity dika-teny amin'ny teny Arabo ity
Manoratra ao amin'ny Egyptian Wish (Fanirian'ny Ejypsiana), nanonona ny ampahan-dahatsoratra navoakan'i Mohamed El Sayed Ahmed ny Aljazeera.net, izay milaza hoe:
رغم احمرار اشارة عبور المشاه باحد ضواحي دبي الا ان الطريق كان سالك – فعبرت وبعض الهنود والافارقة – فيما ظلت فتاتين صينيتين ورجل اوروبي منتظرين حتى تفتح الاشارة – ففكرت في دلك واكتشفت ان هذا هو الفرق بين الصين واوروبا من جه وبين الدول الاخرى من جه اخرى – فاحترامهم للقواعد جعلتهم الاقوى – فقررت الالتزام باشارة المرور لعلي اصبح مثلهم – هذة هي الصين عملاق المستقبل
Na dia eo aza ny jiro mena amin'ny fifamoivoizana ao amin'ny iray amin'ireo araben'ny tanàna manodidina an'i Dubai, izay vitsy fiara mpandeha ny arabe, niampita arabe niaraka tamin'ireo Indiana sy Afrikana vitsivitsy aho, raha nisy tovovavy Sinoa roa sy lehilahy Eoropeana kosa iray niandry ny fivadihan'ny jirom-pifamoivoizana ho maitso. Nieritreritra momba izany aho, ary nahita fa izany no maha samy hafa an'i Shina sy Eoropa eo amin'ny lafiny iray sy ny firenen-kafa eo amin'ny lafiny hafa. Ny fanajan'izy ireo ny fitsipika no nampatanjaka azy ireo. Ka nanapa-kevitra aho mba hanaja ny fitsipiky ny fifamoivoizana mba ho tahaka azy ireo indray andro any.
Izany i Shina, goavam-be ny hoavy.
Tiorkia 19 ora izay
Tiorkia 22 ora izay
Tiorkia 7 andro izay